ပါဝါကိရိယာများကိုမည်သို့ထိန်းသိမ်းရမည်နည်း။ - Mibond စက်ပစ္စည်း
နေအိမ် / သတင်း / ဘလော့ / ပါဝါကိရိယာများကိုမည်သို့ထိန်းသိမ်းရမည်နည်း။
views:100 Author:ဆိုက်ကို Editor ကို အချိန် Publish: 2021-10-02 မူလ:ဆိုက်ကို
ငါတို့သိတယ်OME ပြ problems နာများလိမ့်မည်ပေါ်လာဘယ်တော့လဲကဲွကွာသောပါဝါကိရိယာများ အပါအဝင်လက်ပါဝါကိရိယာများနှင့်ပါဝါကိရိယာများအစိတ်အပိုင်းများ အချိန်ကြာမြင့်စွာအသုံးပြုကြသည်။ ဤအချိန်တွင်ပြင်ဆင်မှုများနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုလိုအပ်သည်က c ကတည်းကကောင်းမွန်စွာပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုသည်စွမ်းအင်သုံးကိရိယာများကိုပိုမိုကြာရှည်စွာပေးနိုင်သည်။ဒါပေမယ့် sOME ပြ problems နာများလိုအပ်သည်ပေးဆောင်ခံရဖို့၏ပြုပြင်နှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအတွက်အာရုံစူးစိုက်မှုပါဝါအမျိုးမျိုးကိရိယာများ. ဤဆောင်းပါးတွင်ပါဝါကိရိယာများကိုမည်သို့ထိန်းသိမ်းရမည်ကိုကျွန်ုပ်တို့အားပြောပြပါလိမ့်မည် စနစ်တကျ။
က) ကျေးဇူးပြု. အလုပ် area ရိယာကိုသန့်ရှင်းအောင်ထားပါအလင်း, C က cHaotic နှင့် Dim မှေးမှိန်နေသော areas ရိယာများသည်မတော်တဆမှုများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။
(ခ) ကျေးဇူးပြု. ဓာတ်ငွေ့သို့မဟုတ်ဖုန်မှုန့်များနှင့်ပတ်0န်းကျင်ကဲ့သို့သောပေါက်ကွဲနိုင်သောပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုတွင်ပါဝါကိရိယာများကိုမသုံးပါနှင့်။ ပါဝါကိရိယာများမှမီးပွားများသည်ဖုန်မှုန့်နှင့်ဓာတ်ငွေ့များကိုလောင်ကျွမ်းစေနိုင်သည်။
က) Power Socket သည်ကိုက်ညီရမည် ပါဝါ tool ကိုs plug.မည်သည့်အခြေအနေမျိုးတွင်မဆိုပါဝါ plug ကိုမပြုပြင်ပါနှင့်။ ဘုံမြေနှင့်မည်သည့် socket ကိုမသုံးပါနှင့်။ ပြုပြင်မွမ်းမံထားသောပလပ်နှင့်သင့်လျော်သော socketets သည်လျှပ်စစ်ထိတ်လန့်မှုအန္တရာယ်ကိုလျှော့ချနိုင်သည်။
ခ) pipses, အပူပေးစက်များ, မီးဖိုများနှင့်ရေခဲသေတ္တာများကဲ့သို့သောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆက်အသွယ်များကိုရှောင်ပါ။ သင်၏ခန္ဓာကိုယ်သည်အခြေအနေသည်ရင်ဆိုင်လျှင်လျှပ်စစ်ထိတ်လန့်မှုအန္တရာယ်ကိုတိုးပွားစေလိမ့်မည်။
ဂ) ပစ္စည်းကိရိယာများကိုမိုးနှင့်စိုစွတ်သောပတ်ဝန်းကျင်မှဝေးဝေးထားပါ။ ပါဝါ tool ကိုထည့်သွင်းရေသည်လျှပ်စစ်ထိတ်လန့်မှုအန္တရာယ်ကိုတိုးပွားစေလိမ့်မည်။
()) အခြားရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ပါဝါကြိုးမသုံးပါနှင့်,ဥပမာ,ရုပ်လှမ်းမှ tools များကိုဆွဲချခြင်း, ဆွဲချခြင်း, ပါဝါကြိုးများကိုအပူ, ရေနံ, ချွန်ထက်သောအနားသို့မဟုတ်ရွေ့လျားနေသောကိရိယာများမှဝေးဝေးထားပါ။ ပျက်စီးသွားသောသို့မဟုတ်ရှုပ်ထွေးသောပါဝါကြိုးသည်လျှပ်စစ်ထိတ်လန့်မှုအန္တရာယ်ကိုတိုးစေသည်။
င) သင်အသုံးပြုသည့်အခါ)ကြိုးခင်းပါဝါကိရိယာများအပြင်ဘက်တွင်အိမ်ပြင်တွင်အသုံးပြုရန်ခွင့်ပြုထားသော extension cord များကိုသုံးပါ။ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပြတ်တောက်မှုအန္တရာယ်ကိုလျှော့ချရန်ပြင်ပအသုံးပြုရန်အတွက်သင့်တော်သော extension ကိုသုံးပါ။
က) ကျေးဇူးပြုပြီးနိုးနေပါနှင့်အလုပ်အပေါ်အာရုံစူးစိုက်ဘယ်တော့လဲအော်ဒီယိုလည်ပတ်ing ကြိုးသို့မဟုတ် ပြိုင်ပါဝါကိရိယာများ။ သင်ပင်ပန်းနေသည့်သို့မဟုတ်မူးယစ်ဆေးဝါးများ, အရက်သို့မဟုတ်မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏လွှမ်းမိုးမှုအောက်တွင်ပါဝါကိရိယာများကိုမသုံးပါနှင့်။ မည်သည့်ခဏတာအာရုံပျံ့လွင့်မှုသည်ပြင်းထန်သောဒဏ်ရာကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည် ပါဝါကိရိယာများကိုအသုံးပြုတဲ့အခါ။
ခ) ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအကာအကွယ်ပစ္စည်းကိရိယာများကို0တ်ဆင်ပြီးအကာအကွယ်မျက်မှန်ကိုတပ်ထားလေ့ရှိသည်။ အဆိုအရကဲွကွာသောပါဝါ tool ကိုs, ဝတ်ဆင်ရန်သတိရပါ ကဲွကွာသောကိုယ်ပိုင်အကာအကွယ်ပစ္စည်းကိရိယာများsထိုကဲ့သို့သောဖုန်မှုန့်မျက်နှာဖုံးများ,sသို့မဟုတ်ဆူညံသံကာကွယ်ရေး EANMURMS ဒဏ်ရာရမှုအန္တရာယ်ကိုလျှော့ချရန်။
ဂ) ပစ္စည်းကိုမရည်ရွယ်ဘဲဖွင့်ပါ။ plug ကို socket ထဲသို့ထည့်သွင်းခြင်းမပြုမီ switch ကို\_"OFF\_" အနေအထားကိုသတ်မှတ်ထားကြောင်းသေချာပါစေ။ ရွေ့လျားတဲ့အခါစွမ်းအားတန်းဆာကိရိယာကြိုးနှင့်အတူ s, ဒွန်’t ကို switch လျှင်ကြိုးနှင့် plug ကိုဆွဲပါ\_"ဏ၌တည်၏n\_"အနေအထား,မဟုတ်ရင်ဒါဟာမတော်တဆမှုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။
)) ပါဝါကိရိယာကိုမဖွင့်မီညှိသောဝက်အူလှည့သို့မဟုတ်လိမ်ဖဲ့ခြင်းကိုဖယ်ရှားပါ။ ထိတွေ့မှုသို့ထိတွေ့မှုရှိသည့်ကိရိယာများသို့မဟုတ်လိမ်ဖဲ့ခြင်းလှည့်တန်းဆာကိရိယာအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုပုဂ္ဂိုလ်ရေးဒဏ်ရာဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။
င) ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမအိပ်ပါနှင့်။ အမြဲတမ်းလုံခြုံစွာရပ်တည်ရန်နှင့်သင်၏ဟန်ချက်ကိုစောင့်ရှောက်ရန်ဂရုစိုက်ပါ။ ဤအချက်သည်သင်မတော်တဆမှုတစ်ခုတွင်ပါဝါကိရိယာကိုပိုမိုထိန်းချုပ်နိုင်စေရန်သေချာသည်အစဉ်မပြတ်လုံခြုံစွာနေကြလော့။
ကွဲပြားခြားနားသောပါဝါ tools တွေကို အမျိုးမျိုးသောပါဝါ tools တွေကို လက်ပါဝါကိရိယာများ ပါဝါကိရိယာများအစိတ်အပိုင်းများ ကြိုးပါဝါကိရိယာများ ပါဝါ Tools Plug ကြိုးမဲ့ပါဝါကိရိယာများ Cord နှင့်ပါဝါကိရိယာများ tool ကိုအစိတ်အပိုင်းများလှည့်